Ndị na -emepụta ihe na ndị na -ebubata ya Diode Laser Hair Removal Machine Factory - China Diode Laser Hair Removal Machine Factory
Mwepụ ntutu na -adịgide adịgide ọkachamara ọkachamara Gentlemax Pro Bikini dum
Igwe mwepụ ntutu na -adịgide adịgide bụ usoro na -adịghị emerụ ahụ, nke a na -eme iji wepụ ntutu na -achọghị n'ihu na ahụ. Enwere ike ịme mwepụ ntutu na -adịgide adịgide ebe ọ bụla na ahụ, ewezuga mpaghara anya. Ọgwụgwọ na -akacha arụ ọrụ nke ọma na ndị nwere agba akpụkpọ anụ nwere ntutu ojii.
Igwe na -ewepụ ntutu kacha mma Alma Soprano Ice Platinum Diode Laser maka akpụkpọ anụ gbara ọchịchịrị
Iwepụ ntutu Diode Laser bụ nhọrọ iwepụ ntutu ogologo oge ọzọ. Dị ka electrolysis, ọgwụgwọ a na -elekwasị anya na ntutu ntutu. Ọ na-arụ ọrụ site na imebi follicle ya na lasers dị ọkụ iji kwụsị ntutu ọhụrụ ito.
Igwe mkpanaka iwepụ ntutu isi Alexandrite maka ọrịre
laser mwepụ ntutu ntutu bụ ụzọ ama ama ma dịkwa mma nke iwepụ ntutu. Semiconductor Laser 808 iwepụ ntutu bụ teknụzụ mwepụ ntutu kachasị elu n'ahịa. Uru ya bụ na usoro mbelata ahụ dị mma nke ukwuu, enweghị mgbu, yana mmetụta mbelata dịkwa oke mkpa.
Igwe mwepụ ntutu na-adịgide adịgide na-arụ ọrụ nke ọma
Igwe mwepụ ntutu na-adịgide adịgide gụnyere iji laser nwere ike dị elu bibie ntutu na ntutu ntutu. Tupu etinyere laser ahụ, a na -etinye onye na -ahụ ihe nju oyi na nke jụrụ oyi na akpụkpọ ahụ iji belata ahụ erughị ala. Onye ọkachamara zụrụ azụ na -eji laser n'ahụ gị ewepụ ntutu na -achọghị. A na -achọkarị ọtụtụ ọgwụgwọ laser iji nweta nsonaazụ kacha mma; nsonaazụ ikpeazụ nke usoro mwepụ laser nwere ike ịdịru ọtụtụ afọ.
705 808 1064NM Igwe eji ewepu ntutu laser ugboro abụọ
igwe mwepụ ntutu laser bụ usoro ahụike nke na -eji nnukwu ọkụ (laser) iji kpochapụ ntutu na -achọghị. N'oge usoro iwepụ ntutu, laser na -ewepụta ọkụ nke ụcha (melanin) na -etinye na ntutu. A na -agbanwe ọkụ a ka ọ bụrụ ike ọkụ, nke na -emebi ntutu ntutu ma n'aka nke ya, na -enyere aka belata uto ntutu. Ọ bụ usoro igbochi ntutu gị ka ọ na -eto site n'ikpughere mgbọrọgwụ ya na oke ọkụ ọkụ laser nke na -emebi ntutu ntutu.
808nm 1064Nm Diode Laser Machine Iwepụ Igwe
Iwepụ ntutu Laser 808 bụ ụzọ ama ama ma dịkwa mma maka iwepụ ntutu. Semiconductor Laser 808 iwepụ ntutu bụ teknụzụ mwepụ ntutu kachasị elu n'ahịa. Uru ya bụ na usoro mbelata ahụ dị mma nke ukwuu, enweghị mgbu, yana mmetụta mbelata dịkwa oke mkpa.
Ike kachasị elu 1200W-2400W teknụzụ teknụzụ laser diode
Iwepu ntutu Diode laser bụ teknụzụ mwepụ ntutu kacha dị ugbu a n'ahịa. Uru ya bụ ntutu
Usoro mwepụ dị mma nke ukwuu, enweghị mgbu ọ bụla, na mmetụta iwepụ ntutu dịkwa oke mkpa.
1200pro nwere ihe ejiri aka abụọ. Ndị ahịa nwere ike họrọ aka nke nha na ike dị iche iche dịka mkpa ha si dị
iji mee ka ọgwụgwọ nke akụkụ ahụ dị iche iche dị mfe
Teknụzụ mwepụ ntutu laser kacha mma nke 1200W
Alam Laser ice jụrụ oyi ọgwụgwọ kacha mma 1200W
Igwe eji ewepụ ntutu isi diode laser 1200W
Iwepu ntutu Diode laser bụ teknụzụ mwepụ ntutu kacha dị ugbu a n'ahịa. Uru ya bụ na usoro iwepụ ntutu dị ezigbo mma, enweghị mgbu ọ bụla, yana mmetụta iwepụ ntutu dịkwa oke mkpa.Diolasheer Ice 1200pro nwere aka abụọ. Ndị ahịa nwere ike họrọ aka nke nha na ike dị iche iche dịka mkpa ha si dị iji mee ka ọgwụgwọ nke akụkụ ahụ dị iche iche dị mfe.
CE kwadoro laser diode ngwaahịa 808nm ngwaahịa ọzụzụ iwepụ ntutu Nubway 808 diode laser maka ọrịre
Igwe mwepụ ntutu Diode Laser ugbu a bụ igwe mwepụ ntutu kacha dị elu ma dị irè na
ahịa. Site n'ịhazigharị ogologo ebili mmiri laser na obosara obi, laser nwere ike banye n'ime akpụkpọ ahụ dị n'elu
wee rute ebe ntutu dị. Mgbe ahụ, a ga -enwe ike ihie ọkụ wee bụrụ ike ọkụ nke nwere ike
mebie ntutu ntutu. Ya mere, laser ga -eme ka ntutu kwụsị inwe ike ịmụgharị ebe ọ na -agaghị ebibi gburugburu
anụ ahụ. Yabụ Diode Laser Machine Removal Machine bụ teknụzụ na -enweghị mgbu nke nwere ike wepu ntutu dị iche iche
n'enweghị nsogbu, ngwa ngwa na ogologo oge.
CE kwadoro Ọgbọ Ọhụrụ 808nm Diode Laser Machine Removal Machine
Ngwa mma Nnukwu nha 808nm Diode Laser Machine Iwepụ Igwe
2021 kachasị ọhụrụ 3 wavelength 755nm+808nm+1064nm ọkachamara soprano na -enweghị mgbu diode laser hair machine na igwe ọgwụ CE
Igwe mwepụ ntutu Laser kacha arụ ọrụ nke ọma 808nm Micro Channel System